Umlilo omkhulu kunye nokudubula
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba e-UK » Umlilo omkhulu kunye nokudubula: isikhululo sikaloliwe sase-London seNdlovu kunye neNqaba
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba zaseYurophu • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • Ukuhamba ngololiwe • Iindaba ezijongene noKhenketho • Safety • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zothutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo • Iindaba zase-UK
Umlilo omkhulu kunye nokudubula: isikhululo sikaloliwe sase-London seNdlovu kunye neNqaba
Umlilo ugqibe iiyunithi ezintathu zorhwebo phantsi kweengqameko zikaloliwe zesikhululo, kunye neemoto ezine kunye nebhokisi yomnxeba.
I-London Fire Brigade ibongoze abahlali ukuba bayiphephe le ndawo kwaye bagcine zonke iifestile neengcango zivaliwe.
Amagosa amaPolisa oThutho ase-Bhritane kunye namaPolisa aseMetropolitan nawo aya kwesi sigameko
Isiganeko asikholelwa ukuba sinxulumene nobugrogrisi, amapolisa athi.
Isikhululo esingaphantsi komhlaba saseLondon seNdlovu neNqaba sikhutshwe namhlanje emva komlilo omkhulu oqubuke kwiiyunithi zorhwebo kufutshane nesikhululo sikaloliwe.
Ubuninzi bomsi omnyama unokubonakala ungqengqeleka kwiziko lezothutho ngoMvulo kumzobo wesiganeko esithunyelwe kumajelo onxibelelwano. Enye ividiyo ibonise abasebenzi bezongxamiseko kunye nabantu abadlulayo bebukele umlilo ngaphambi kokuba kuqhume umlilo omkhulu ecaleni kwesakhiwo.
Zizonke iinjini zomlilo ezili-15 kunye nabacimi-mlilo abali-100 abathunyelwe ukujongana nomlilo, ngokutsho kweButho lezoMlilo eLondon.
Khange kubekho ngxelo zokonzakala.
Uqhushumbo lunye lwashukumisa isiza emva kokutsha komlilo kwaye ukuphuma kwesikhululo kwakusendleleni.
I-London Fire Brigade ibongoze abahlali ukuba bayiphephe le ndawo kwaye bagcine zonke iifestile neengcango zivaliwe. Kwingxelo, iqinisekisile ukuvalwa kwendlela ikwakhona kwaye yathi umlilo uhlasele iiyunithi ezintathu zorhwebo phantsi komgaqo kaloliwe wesikhululo, kunye neemoto ezine kunye nebhokisi yomnxeba.
Amagosa amaPolisa oThutho ase-Bhritane kunye namaPolisa aseMetropolitan nawo aya kwesi sigameko.
"Isigameko asikholelwa ukuba sinxulumene nobunqolobi," utshilo amapolisa kwisithili saseLondon eSouthwark.
Umqhubi kaloliwe uThameslink uthe yonke imigca enqumla kwiNdlovu kunye neNqaba ivaliwe kwaye abacimi mlilo bavavanya imeko. Kuhlaziyo olukhutshwe nguLoliwe kaZwelonke, inkonzo yathi "umlilo ecaleni kwetrekhi ” kuthetha ukuba oololiwe abayi kuba nakho ukusebenzisa isikhululo kude kube nge-8 ngokuhlwa ngexesha lendawo.